इतिहासकै क्रूर शासक ! छ लाख मान्छेको हत्या गरे,साथै मान्छेको मासु खान्थे
Posted on January 12, 2019 January 12, 2019 by J NP
एजेन्सी । विश्वको इतिहासमा कैयन् क्रूर शासकहरुका बारेमा पढ्न पाइन्छ । ती मध्ये युगान्डाका पूर्व राष्ट्रपति इदि अमिन सायद विश्वका सबैभन्दा क्रूर शासक हुन् । उनी सबैभन्दा क्रूर यस अर्थमा की उनलाई मानिसहरु मान्छे मान्न तयार छैनन् । भयंकर चरित्र भएका अमिनले मान्छे मारेर मासु खान्थे । उनको क्रूरताको कहानी साँच्चिकै डरलाग्ने खालको छ ।
झण्डै ८ वर्ष राष्ट्रपति बनेका तानाशाह अमीनले आफ्नो शासनकालमा ६ लाखभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिए ।
सुन्दरी युवतीहरुलाई उनले आफ्नो सिकार बनाउँथे । मानिसलाई मार्नका लागि हतियारको प्रयोग गर्दैनथे । कतिपयलाई जिउँदै जमिनमुनि गाडेर मार्थे र त्यतिगर्दा पनि बाँचेकाहरुलाई आफुले पालेको भोको गोहीलाई खुवाउँथे ।
उनी मान्छेको मासु खान निकै मन पराउँथे । उनको फ्रिजबाट मानिसका काटेका टाउकाहरु बरामद भएका थिए । साथै फ्रिजमा मानिसको जिउका अरु अंगहरु पनि फेला परेका थिए । उनलाई अफ्रिकाका बहुलाहा मान्छेको नामले पनि चिनिन्छ ।
सन् १९७९ मा तान्जानिया तथा अमीन विरोधी युगान्डाली सेनाले अमिनलाई अपदस्थ गरेपछि ती तानाशाहको शासनसत्ता समाप्त भयो । त्यसपछि उनी भागेर साउदी अरब आए । सन् २००३ मा उनको मृत्यु भयो ।
विश्व इतिहासकै खतानाक र क्रुर तानाशाहा,दैनिक जसो मान्छे नमारी सुत्दैन थिए !!
जग्गा कित्ताकाट आजबाट खुल्ला, अब फेरी जग्गाको प्लटिङ गरेर बेच्नेहरुको बाटो खुल्यो